ဒူဒူကြီး: September 2011
Cylinder Liners တွေကို၊ Dry Type, Wet Type နဲ့ Finned Type Cylinder Liners တွေရယ်လို့ (၃) မျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Dry Type လို့ခါါရတာကတော့ cylinder block အတွင်းလှည့်လည်သွားလာနေတဲ့၊ coolant နဲ့ ထိတွေ့မှု မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ liners ကို cylinder block ရဲ့ bore အောက်ခြေအထိ ရောက်အောင်၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ dry type cylinder liners တွေကို၊ wet type cylinder liners တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရင်၊ ပိုမို ပါးလွှာတာကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို၊ cylinder block ရဲ့ အပူရှိန်နဲ့ combustion ကြောင့် ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ အပူရှိန် တို့ကို၊ ပိုမိုလက်ခံရတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Dry type cylinder liner
dry type cylinder liners တွေကို၊ cast iron နဲ့ ceramic-nickle ကိုရောစပ်ကာ၊ centrifugally casting နည်းနဲ့ သွန်းလောင်းပါတယ်။ BMW, Caterpillar, Chevrolet, Citroen, Cummins, DAF, Deutz, Daihatsu, Eicher, Escorts, Ford, Hino, Honda, Hyundai, Isuzu, John Deere, Komatsu, Kirloskar, Land Rover, Mack, Man, Massey, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Navistar, Nissan, Opel, Perkins, Peugeot, Renault, Rover, Scannia,Tata, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volvo, Wolseley, Yanmar နဲ့ Zetor အစရှိတဲ့ အသေးစားနဲ့ အလတ်စား4Stroke Engine တွေမှာ၊ တတ်ဆင် အသုံးပြု ပါတယ်။
cylinder block အတွင်းလှည့်လည်သွားလာနေတဲ့၊ coolant နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေတဲ့အတွက်၊ wet type cylinder liners လို့ခေါါကြပါတယ်။ wet liners တွေဟာ၊ dry liners တွေထက်ပိုထူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် coolant ဟာ cylinder liner အတွင်းမှာ၊ လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့ water jacket liners တွေကိုလည်း၊ wet type cylinder liner အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Wet type cylinder liner
wet liners တွေမှာ၊ အပူခံနိုင်တဲ့ "Viton" seal လို၊ rubber သို့မဟုတ် neoprene rings တွေပါပြီး၊ cylinder liner O - rings လို့ခေါါကြပါတယ်။ အဲဒီ O - rings တွေဟာ၊ coolant သို့မဟုတ် cylinder cooling water ကို၊ oil sump မှ၊ Lubricating Oil နဲ့ ထိတွေ့ရောနှောမှု မဖြစ်စေဖို့ တားဆီးပေးပါတယ်။
Fig. Water jacket cylinder liner
wet type liners တွေကို၊ အကြီးစား4Stroke နဲ့2Stroke Engine တွေမှာတတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Finned cylinder liners
Finned cylinder liners တွေကို၊ air cooled engine တွေ၊ များသောအားဖြင့် Emergency generator engine လို၊ အသေးစား engine တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ shell molding casting နည်းနဲ့ သွန်းလောင်း ထားတာဖြစ်ပြီး၊ ပြင်ပလေကို liner ရဲ့ fins တွေအတွင်းမှ ဖြတ်သန်းစေပြီး temperature ကိုလျှော့ချပါ တယ်။
Piston rings တွေနဲ့ အမြဲပွတ်တိုက်နေတဲ့၊ cylinder liner အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ဟာ၊ ချောမွေ့ နေရမှာ ဖြစ်သလို၊ Anti-corrosion အပြင်၊ wear down effect ပွတ်စားမှုဒဏ်ကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါ တယ်။ cast iron နဲ့ သွန်းလောင်းထားတဲ့ cylinder liners တွေမှာ၊ chromium, copper သို့မဟုတ် nickle (၅ %) ခန့်ကိုပါ၊ ထည့်သွင်းထားလေ့ရှိပြီး၊ အရွယ်အစားကြီးတဲ့ liners တွေကို၊ sand casting နည်းနဲ့ သွန်းလောင်း ပါတယ်။
Cylinder liner wear down ကိုတားဆီးဖို့ cylinder lubricating system ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ cylinder lubricating မလုံလောက်တဲ့အခါ၊ wear down သာမက acidic corrosion တွေပါဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ lubrication ကိုခွဲခြားကြည့်မယ်ဆိုရင် Hydrodynamic lubrication or thick film lubrication, Hydrostatic lubrication, Boundary lubrication or thin film lubrication နဲ့ Extreme pressure lubrication ရယ်လို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး၊ cylinder liner တွေအတွက်၊ Hydrodynamic lubrication လို့ခေါါတဲ့ Thick film lubrication system ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ liner wear down limit ကို၊ မူလ cylinder liner အသစ်တလုံးရဲ့ bore diameter (0.6 ~ 0.8 %) အထိ၊ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ wear down ဟာ 0.8 % ထက်ကျော်ရင် အသစ်လဲလှယ်သင့်ပါ တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် engine running hours (၁၀၀၀) နာရီတိုင်းမှာ၊2stroke engine ရဲ့ cylinder liners တွေဟာ၊ (0.0250 ~ 0.05 %) ခန့်နဲ့၊4stroke engine တွေကတော့ (0.0125 ~ 0.025 %) ခန့် wear down ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
Liner wear down ကို Friction wear down, Abrasion wear down, Corrosion wear down, Adhesion wear down, Clover leafing wear down နဲ့ Micro-seizure wear down ဆိုပြီး၊ တွေ့နိုင် ပါတယ်။ Friction wear ဟာ piston rings တွေနဲ့ liner material တို့ရဲ့ အားနည်းချက်၊ liner surface မညီညာမှု၊ cylinder lubricating မလုံလောက်မှု၊ တို့အပြင်၊ piston ရဲ့ speed နဲ့ engine load တို့ကြောင့်လည်းဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။
Abrasion wear ဟာ၊ piston, piston rings, turbo-charger တို့မှ၊ mechanical wear ကြောင့်၊ "ပဲ့" ထွက်လာတဲ့အစလေးတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်သလို၊ လောင်စာဆီ အရည်အသွေးညံ့တဲ့အခါ၊ combustion မှာ ပေါါပေါက်လာတဲ့ ash ပြာတွေကြောင့်လည်း၊ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
Corrosion wear ဟာ sulpher ပါဝင်မှုများတဲ့ HFO heavy fuel oil ကိုအသုံးပြုတဲ့ engine တွေမှာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ high sulpher content fuel oil ဟာ၊ combustion ဖြစ်စဉ်၊ lubricating oil ရဲ့ alkanity ကို၊ မြင့်မားစေပါတယ်။ corrosion wear ကို၊ sulphic acid corrosion လို့ခေါါဆိုလေ့ရှိကြပြီး၊ liner အာက်ခြေပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ high sulpher content fuel ကိုအသုံးပြုပြီး၊ jacket cooling water temperature နိမ့်တဲ့အခါ၊ corrosion wear ပိုမိုဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
Adhesion/ Scuffing wear ကတော့၊ piston rings တွေနဲ့ liner အကြား၊ lubricating temperature မြင့်မားခြင်း၊ lubricating pressure မလုံလောက်ခြင်း၊ Lubricating Oil အမျိုးအစား မှန်ကန်မှုမရှိခြင်းနဲ့ piston rings တွေမှတဆင့် blow-pass ဖြစ်နေခြင်း၊ စတဲ့အခြေအနေမျိုးကြောင့်၊ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ adhesion ဟာ rappid wear ဖြစ်ပါတယ်။ Clover leafing wear down ကတော့ sulpher content များတဲ့၊ fuel ကို၊ အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ liner အတွင်းမျက်နှာပြင်မှာဖြစ်ပေါါလေ့ရှိပါတယ်။ Micro-seizure wear down ကတော့ piston rings တွေတတ်ဆင်ပုံအနေအထား မမှန်ကန်တဲ့အခါမျိုးတွေနဲ့၊ piston ring ကျိုးတဲ့အခါ ပဲ့ထွက်လာတဲ့ အစလေးနဲ့ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
Cylinder liner wear down ဟာ အသုံးပြုတဲ့ လောင်စာဆီအမျိုးအစားပေါါမူတည်ပြီး၊ ကွာခြားပါတယ်။ HFO - Heavy fuel oil ကိုသုံးတဲ့ engines တွေဟာ၊ MDO - Marine diesel oil သို့မဟုတ် MGO - Marine gas oil ကိုသုံးတဲ့ engines တွေထက် liner wear down ပိုမိုဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
Fig. Cylinder liner wear down rate
Liner တလုံးဟာ မူလထက် (0.6 ~ 0.8 %) ခန့် wear down ဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်း၊ အချိန်တိုအတွင်း ပိုပြီး၊ မြန်မြန်ဆက်တိုက် wear down ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ wear down ပွန်းစားမှုကို အဓိကတားဆီး ကာကွယ်ပေးတဲ့ cylinder lubricating oil ဟာအရေးကြီးပြီး၊ အမျိုးအစားမှန်ကန်ဖို့နဲ့ system တွင်းမှာ လုံလောက်တဲ့ ထောက်ပံ့မှူကို၊ ပေးနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် piston rings တွေကို မှန်ကန်စွာတတ် ဆင်ခြင်း၊ လုံလောက်တဲ့ warming ရရှိပြီးမှသာ အင်ဂျင်ကို စတင်နှိုးခြင်း၊ စက်မောင်းချိန် running hours ပေါါမူတည်လို့ fuel injectors တွေကို ပုံမှန်စစ်ဆေးကာ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အကယ်၍ HFO ကိုအသုံးပြုပါက FO Purification နဲ့ FO Storage အစရှိတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက် အလက်၊ အဆင့်အတန်းအတိုင်းလိုက်နာအသုံးပြုခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ jacket cooling fresh water အပူချိန်အတိုင်းအသုံးပြုခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Scavange air အပူချိန်အတိုင်း အသုံးပြုခြင်းနဲ့ အင်ဂျင်ကို Load တင်တဲ့အခါ ရုတ်တရက်ချက်ခြင်း မတင်ပဲ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဆင့်အတိုင်း၊ လိုက်နာကာ Load တင်ြခင်း အစရှိတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို၊ အသုံးပြုကာ ပွန်းစားမှုအား၊ လျော့ချနိုင်ပါတယ်။
Liner wear down ဖြစ်တာနဲ့ blow pass ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ blow pass ဟာ၊ incorrect combustion ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ တခါ incorrect combustion ကြောင့်၊ exhaust system တွေကိုထိခိုက်ကာ Turbo-charger မှာ၊ surging ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ incorrect combustion ဟာ scavenge fire ကိုဖြစ်စေ တတ်သလို၊ scavenge fire မှတဆင့် crank case explosion အထိဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
Image credit to : http://autonopedia.org, http://www.indiamart.com, http://www.tpub.com,
Posted by ကိုထွန်း at 19:00 No comments:
Tonnage Measurement of Ships, 1969.
ဒီစာအုပ် ကတော့ International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 ဖြစ်ပါတယ်။
Credit to : ကိုလမင်းဦး
Posted by ဒူဒူကြီး at 02:57 No comments:
ဒီစာအုပ် ကတော့ STCW, 95 - International Convention on Standard of Trainings, Certifications and Watchkeeping for Seafarers စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 22:56 No comments:
Load Line Convention, 2005 Edition
ဒီစာအုပ် ကတော့ Load Line Convention, 2005 Edition စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 22:47 No comments:
ဒီစာအုပ် ကတော့ Ballast Water Management Convention and The Guidelines for its Implementation, 2009 Edition စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 22:37 No comments:
Life-saving Appliances, LSA Code 2010 Edition
ဒီစာအုပ် ကတော့ Life-saving Appliances, LSA Code 2010 Edition စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 01:04 No comments:
Intact Stability 2008 Edition
ဒီစာအုပ် ကတော့ Intact Stability 2008 Edition စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 00:39 No comments:
FSS Code - International Code for Fire Safety Systems, 2007 Edition
ဒီစာအုပ် ကတော့ FSS Code လို့ခေါါတဲ့ International Code for Fire Safety Systems, 2007 Edition ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 23:47 No comments:
MARPOL 2006 Consolidated Edition
ဒီစာအုပ် ကတော့ MARPOL 2006 Consolidated Edition စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 23:33 No comments:
ASME standard I, ASME standard VIII နဲ့ ASME / ANSI PTC 25.3 standard အရသတ်မှတ်ထား တဲ့၊ Safety valves နဲ့ relief valves တွေကတော့ - ASME I valve , ASME VIII valve, Low lift safety valve, Full lift safety valve, Full bore safety valve, Conventional safety relief valve, Balanced safety relief valve, Pilot operated pressure relief valve နဲ့ Power-actuated safety relief valve တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
DIN 3320 standard အရ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ Safety valves နဲ့ relief valves တွေကတော့ -
Standard safety valve, Full lift (Vollhub) safety valve, Direct loaded safety valve, Proportional safety valve, Diaphragm safety valve, Bellows safety valve နဲ့ Controlled safety valve တို့ဖြစ်ပါ တယ်။
Fig. Safety valve performance summary
EN ISO 4126 standard အရ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ Safety valves တွေကတော့ - Safety valve, Direct loaded safety valve, Assisted safety valve, Supplementary loaded safety valve နဲ့ Pilot operated safety valve တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Safety valve materials
safety valves တွေအမျိုးအစားကွဲပြားပေမယ့်၊ အသုံးပြုတဲ့ materials မှာ ယေဘုယျအားဖြင့် တူညီမှု ရှိပါတယ်။ cryogenic applications, corrosive fluids applications တွေနဲ့ discharged fluid မှာ contamination ပါဝင်မှုကိုခွင့်မပြုတဲ့ applications တွေမှာ၊ သုံးတဲ့ safety valves တွေရဲ့ materials တွေ ကတော့ကွာခြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
safety valve discharging ပြုလုပ်တဲ့အခါ၊ wetted parts တွေမှတဆင့် fluid ဖြတ်သန်းသွားတာမို့၊ wetted parts လို့ခေါါတဲ့ pressure-containing components အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ materials တွေဟာ corrosion ကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ pressure-containing components တွေအတွက်၊ အသုံးပြုတဲ့ materials တွေကတော့ Bronze, Cast iron, SG iron, Cast steel နဲ့ Austenitic stainless steel တို့  ဖြစ်ပါတယ်။
Bronze ကို 15 bar g အထိအသုံးပြုတဲ့၊ steam, air နဲ့ hot water applications တွေအတွက်၊ အသုံးပြုပါ တယ်။ ASME standard valve တွေမှာ 17 bar g အထိ၊ Cast iron ကိုသုံးပါတယ်။ European vessels တွေမှာ၊ 15 bar g မှ 25 bar g အထိ၊ SG iron ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ Cast steel ကို 40 bar g အထိအသုံးပြုပြီး၊ high pressure valve လို့ခေါါပါတယ်။
process applications တွေအတွက်၊ safety valve body ကို cast steel နဲ့သွန်းလောင်းပြီး wetted parts တွေလို့ ခေါါတဲ့ pressure-containing components တွေအဖြစ်၊ austenitic full nozzle type ကိုသုံးပါတယ်။ food, pharmaceutical သို့မဟုတ် clean steam applications လို၊ process applications တွေအတွက်၊ austenitic stainless steel ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ extremely high pressure applications တွေအတွက်၊ forged သို့မဟုတ် solid machined pressure containing components တွေကိုသုံးပါတယ်။
spindle နဲ့ guide လို၊ moving parts တွေဟာ degrade မဖြစ်ဖို့နဲ့ corrode မဖြစ်ဖို့ လိုအပ်သလို၊ process fluid ကိုထိတွ့နေရတဲ့ seats နဲ့ disc တွေဟာလည်း၊ erosion နဲ့ corrosion effect ကိုခံနိုင် ရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်။ process applications တွေမှာ 'austenitic stainless steel' ကို၊ seats နဲ့ disc တွေ အဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ extremely corrosive fluids တွေနဲ့ထိတွေ့မယ့် nozzles, seats နဲ့ disc တွေ အတွက်၊ 'monel' နဲ့ 'hastelloy' လို materials တွေကိုသုံးပါတယ်။
'austenitic stainless steel' ဆိုတာကတော့၊ high corrosion resistance steel alloy လို့ခေါါတဲ့ stainless steel အုပ်စုထဲက၊ steel alloy တမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ stainless steel တွေကိုခွဲခြားကြည့်ရင် austenitic, ferritic, martensitic, precipitation-hardening martensitic နဲ့ duplex stainless steels ဆိုပြီးတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Iron-carbon phase diagram/ austenitic structure
လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ stainless steel 70 % ဟာ၊ austenitic stainless steel တွေဖြစ်ပြီး၊ Metallurgist သတ္တုဗေဒပညာရှင် Sir William Chandler Roberts-Austen (1843–1902) တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။ austenite သို့မဟုတ် gamma phase iron အဖြစ်၊ austenitization နည်းလမ်းနဲ့ထုတ်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် austenitic structure နဲ့တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
carbon content အများဆုံး 0.15%, chromium content အနည်းဆုံး 16% ၊ nickel နဲ့ manganese တို့ကိုထည့်သွင်းပြီး austenitic structure ကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ typical composition အနေနဲ့ chromium 18% နဲ့ nickel 10% ပါတဲ့၊ austenitic stainless steel ကို 18/10 flatအware stainless
လို့ ခေါါ ကြပါတယ်။ molybdenum content 6% အထက်ပါဝင်တဲ့ AL-6XN နဲ့ 254SMO austenitic stainless steels တွေကို၊ superaustenitic stainless steels လို့ခေါါကြပါတယ်။ superaustenitic stainless steels ဟာ၊ nickel အများအပြားပါဝင်တဲ့ alloy ဖြစ်ပြီး၊ မြင့်မားတဲ့ stress-corrosion cracking resistance ရှိပါတယ်။
အသုံးများတဲ့ SS 304 austenitic stainless steels တွေကတော့ low carbon content stainless steel alloys တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ 304 အုပ်စုကို 304, 304 L နဲ့ 304 H ဆိုပြီး carbon content ပေါါမူတည်ပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ maximum carbon 0.03% ပါဝင်တဲ့ austenitic stainless steels ဟာ၊ 304 L ဖြစ်ပြီး၊ carbon 0.08% ပါဝင်တဲ့ austenitic stainless steels ဟာ၊ 304 ဖြစ်ပါတယ်။ carbon 0.1% အထက်ပါဝင်တဲ့ stainless steels ကတော့ 304 H ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Typical alloy content
austenitic stainless steel 304 ကိုအခြေခံပြီး၊ material တွေထပ်မံပေါင်းစပ်တဲ့အခါ၊ 316, 316 Ti, 320, 321, 347, 308 နဲ့ 309 ဆိုပြီး၊ အခြား austenitic stainless steels alloy များကိုရရှိလာပါတယ်။
'monel' ဆိုတာတော့ US မှ၊ Special Metals Corporation ရဲ့ trademark နာမည်တခုဖြစ်ပါတယ်။ nickel 67 % အထက်ပါဝင်ပြီး၊ copper, iron နဲ့ အခြား trace elements တွေထည့်သွင်းရောစပ်ထားတဲ့၊ nickel alloys သတ္တုစပ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ International Nickel Co. ရဲ့Chief metallurgist သတ္တုဗေဒ ပညာရှင် David H. Browne မှ၊ တီထွင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ International Nickel Co. ပိုင်ရှင် Ambrose Monell ရဲ့နာမည်ကိုယူပြီး၊ မူပိုင်ခွင့်ကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်။
'monel alloy' ဟာ အလွန်မာတဲ့ သတ္တုစပ်တမျိုးဖြစ်ပြီး၊ machines ခုတ်စားတဲ့အခါ၊ slow speed နဲ့ low feed rate နဲ့ ခုတ်စားရပါတယ်။ corrosion နဲ့ acids တွေကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အတွက် highly corrosive application တွေမှာအသုံးပြုပါတယ်။ aluminum နဲ့ titanium အနည်းငယ်ကိုထပ်မံရောစပ်ထားတဲ့ K-500 monel alloy ဟာ၊ highly corrosive resistance အနေနဲ့ ပိုကောင်းလာပေမယ့်၊ aging အသုံးခံ မှုသက် တမ်းတိုတောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဈေးနှုံးအရ 'monel' ဟာ stainless steel ထက်ဈေးပို များပါတယ်။
monel alloy ကို aerospace, marine, directional Drilling အစရှိတဲ့ application တွေနဲ့ musical instruments တွေမှာအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် water နဲ့ fuel tanks တွေ၊ under water applications တွေနဲ့ propeller shaft နဲ့ keel bolts တွေအဖြစ်လည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ monel alloy ဟာ non-magnetic alloy ဖြစ်ပြီး၊ marine application အနေနဲ့ piping systems, pump shafts, seawater valves, trolling wire နဲ့ strainer baskets တွေအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။
minesweepers ရေမြှုတ်မိုင်းရှင်းသဘေ်ာတွေရဲ့ anchor cable အဖြစ်အသုံးပြုသလို၊ magnetic field measuring instruments တွေရဲ့ housing ကိုလည်း၊ monel alloy နဲ့ပြုလုပ်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
Fig. Galvanic corrosion
sea water နဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ၊ monel alloy ရဲ့ electrolytic action ကြောင့်၊ တွဲသုံးမယ့် metal မှာ၊ galvanic corrosion ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
'hastelloy' ဟာလည်း၊ Haynes International Inc. ရဲ့ trademark နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ metallurgical industry သတ္တုဗေဒနယ်ပယ်မှာတော့ “superalloys” သို့မဟုတ် “high-performance alloys” အဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ nickel ကိုအခြေခံထားကာ၊ molybdenum, chromium, cobalt, iron, copper, manganese, titanium, zirconium, aluminum, carbon နဲ့ tungsten သတ္တုတွေ ပေါင်းစပ် ထားတဲ့ metal alloy သတ္တုစပ်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရောနှောပေါင်းစပ်မှု အချိုး အစားပေါါမူတည်ပြီး၊ 'hastelloy' ကို B-2, B-3, C-4, C-2000, C-22, C-276, G-30, N နဲ့ W ဆိုပြီး၊ အမျိုးအစားထပ်မံခွဲခြား ထားပါတယ်။
highly corrosion-resistant metal alloys တွေဖြစ်တဲ့အပြင်၊ high-temperature နဲ့ high-stress service application တွေအတွက်အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ nuclear reactors တွေနဲ့ chemical reactors တွေရဲ့ pressure vessels တွေကို၊ 'hastelloy' နဲ့တည်ဆောက်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။
safety valve မှာ spring ဟာ critical element ဖြစ်ပြီး၊ moderate temperatures တွေအတွက်၊ carbon steel ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ higher temperature အတွက် tungsten steel ကိုသုံးပြီး၊ non-corrosive applications တွေနဲ့ clean steam application တွေအတွက် stainless steel ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ sour gas နဲ့ high temperature applications တွေမှာ၊ တခါတရံ 'monel', 'hastelloy' နဲ့ 'inconel' materials တွေကို safety valve spring အဖြစ်အသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Safety valve disc
high temperature applications ဖြစ်တဲ့ steam လို၊ application တွေအတွက်၊ metal-to-metal seats တွေအဖြစ်၊ stainless steel ကိုသုံးပါတယ်။
Fig. Resilient discs
gas နဲ့ liquid applications လို၊ low temperature applications တွေမှာ seating surfaces အတွက်၊ resilient discs တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Seating materials
resilient disc ဟာ၊ lining ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားတဲ့ disc ဖြစ်ပြီး၊ seal lining အဖြစ်၊ viton, nitrile နဲ့ EPDM တို့ကို သုံးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် soft seal insert disc တွေလို့ခေါါပြီး၊ တခါတရံ seating surface ကိုလည်း၊ soft seal insert အနေနဲ့ ပြုလုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
safety valves တွေမှာ၊ seizing မဖြစ်စေဖို့ routine safety checks အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် easing lever ကိုတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ lever မှာ၊ operation pressure ထက် 75% ကို၊ set pressure အဖြစ် ထားရှိပါတယ်။ အပူချိန် 60°C ထက် ပိုပြီးအသုံးပြုမယ့် safety valve တိုင်းမှာ၊ lever တတ်ဆင်ဖို့ ASME Boiler and Pressure Vessel Code အရ၊ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
easing lever တွေကို၊ open lever နဲ့ packed lever ဆိုပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ fluid ကို atmosphere အတွင်း သို့ lever မတင်ပြီး၊ discharge လုပ်နိုင်တဲ့၊ steam နဲ့ air systems လို application တွေမှာ၊ open lever တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။ packed gland seal ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားတဲ့ packed lever ကိုတော့၊ atmosphere အတွင်းသို့ discharge လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့၊ application တွေအတွက်အသုံးပြုပြီး၊ discharge fluid ဟာ cap အတွင်းမှာသာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Gas tight cap
lever ထည့်သွင်းဖို့မလိုတဲ့ application တွေအတွက် safety valve adjustment screw ကို cap နဲ့ဖုံးအုပ် ထားပြီး၊ adjustment screw conjunction မှ atmosphere ထဲကို leak မဖြစ်စေဖို့၊ gasket ကိုပါထည့်သွင်း ထားပါတယ်။
Fig. Test gag
တခါတရံ test gag တတ်ဆင်ထာတဲ့ safety valves တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ system ကို hydraulic testing လုပ်တဲ့အခါ၊ တနည်းအားဖြင့် system commissioning ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါ၊ set pressure မှာ valve ပွင့်မသွားစေဖို့ test gag ကိုတတ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ system commissioning မလုပ်ခင် gag screw ကိုဖြုတ်ပြီး၊ blanking plug နဲ့ အစားထိုးစစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Diaphragm sealed safety valve
water applications တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ safety valve တွေရဲ့၊ safety valve spring နဲ့ upper chamber တို့ကြားမှာ process fluid ကိုတားဆီးဖို့၊ flexible diaphragm သို့မဟုတ် bellows ကိုတတ်ဆင် ထားလေ့ရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် diaphragm sealing safety valve လို့ခေါါကြပါတယ်။
Safety valve spring housing
open bonnet spring housing နဲ့ closed bonnet spring housing ဆိုပြီး၊ (၂) မျိုးတွေ့ရပါတယ်။
Fig. Open bonnet spring housing
bellows သို့မဟုတ် diaphragm sealing ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ safety valve ရဲ့ design ပေါါမူတည်ပြီး၊ fluid ဟာ spring housing လို့ခေါါတဲ့ bonnet အတွင်းကို၊ ဝင်တတ်ပါတယ်။ atmosphere ထဲစွန့်ထုတ် ခွင့်ရှိတဲ့ fluid တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့၊ diaphragm sealed safety valve တွေမှာ open bonnet ကို တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ boiler လို၊ high temperature fluids application တွေမှာ၊ open bonnet spring housing တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Closed bonnet spring housing
safety valve activated ဖြစ်စဉ်၊ over pressure အနေနဲ့ release လုပ်လိုက်တဲ့ fluid တွေဟာ၊ အကယ်၍ atmosphere ထဲစွန့်ထုတ်ခွင့်မရှိတဲ့ fluid တွေဖြစ်ခဲ့ရင်၊ closed bonnet spring housing တွေကိုအသုံးပြု ပါတယ်။ bellows သို့မဟုတ် diaphragm sealing မှယိုစိမ့်လာတဲ့ fluid ကို၊ safety valve ရဲ့ discharge system အတွင်း၊ စီးဝင်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
conventional safety valves တွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါ၊ discharge system မှ back-pressure ပေါါ မူတည်ပြီး၊ operational characteristics တွေခြားနားမှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် total back-pressure လို့ခေါါနိုင်ပြီး၊ superimposed back-pressure နဲ့ built-up back pressure တို့ပါဝင် ပါတယ်။
superimposed back-pressure ဟာ၊ safety valve ပိတ်နေစဉ်၊ discharge line မှာဖြစ်ပေါါတဲ့ pressure ဖြစ်ပါတယ်။ built-up back pressure ကတော့၊ valve ပွင့်သွားစဉ်၊ discharge line မှာဖြစ်ပေါါတဲ့ additional pressure ဖြစ်ပါတယ်။ conventional safety valves တွေမှာ၊ superimposed back-pressure ဟာ၊ opening characteristic တနည်းအားဖြင့် seat opening value မှာသက်ရောက်မှု ရှိပြီး combined back-pressure ကတော့၊ blow-down characteristic တနည်းအားဖြင့်၊ re-seat value အပေါါ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
superimposed back-pressure ဟာ open bonnet spring housing တွေရဲ့၊ operational characteristics တွေအပေါါသက်ရောက်တဲ့အတွက်၊ ASME/ ANSI standard အရ၊ ထုတ်လုပ်တဲ့ safety valves တွေမှာ၊ spring housing ဟာ discharge side ကိုသာ၊ vented စွန့်ထုတ်ရန်သတ်မှတ်ထားပါ တယ်။
Fig. (a) Closed bonnet spring housing safety valve disc area force acting. Fig. (b) Open bonnet spring housing safety valve disc area force acting
Disc area 'AD' မှာဖြစ်ပေါါမယ့်၊ force acting ကို
PV = Fluid inlet pressure, AN = Nozzle area, FS = Spring force, PB = Back pressure နဲ့ AD = Disc area အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။
superimposed back-pressure ဟာ၊ disc closing force ကိုမြင့်တက်စေတဲ့ အတွက်၊ disc ကို lift "မ" တင်ဖို့၊ fluid inlet pressure ပိုမိုလိုအပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ Open bonnet spring housing safety valve တွေအတွက်၊ opening force ကို၊
အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ superimposed back-pressure ဟာ၊ spring force ကိုတိုးစေတာမို့၊ design အရ တွက်ချက်ထားတဲ့ opening pressure ဟာလျှောနည်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ safety valve design ကိုတွက်ချက်တဲ့အခါ၊ superimposed back-pressure ကိုလျှော့ချဖို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။
အလားတူ valve စတင်ပွင့်စဉ်မှာ၊ ဖြစ်ပေါါလာမယ့် built-up backpressure ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရ ပါတယ်။ spring housing vented conventional safety valve တွေမှာ၊ vented ဟာ discharge side မှာ ရှိတဲ့အခါ၊ built up pressure ဟာ safety valve ရဲ့ set pressure အပေါါသက်ရောက်မှုရှိတာကိုတွေ့ရပါ တယ်။
PS = set pressure of safety valve, AN = nozzle area, FS = spring force, PB = back pressure, PO = over ဆိုပြီးသတ်မှတ်ဖော်ပြပါတယ်။
backpressure ဟာ၊ vented စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ overpressure ထက် ပိုများတဲ့အခါ၊ valve ဟာပြန်ပိတ် သွားနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် valve အဖွင့်အပိတ်ဟာ instability တည်ငြီမ်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ် ပြီး၊ flutter သို့မဟုတ် chatter လို့သုံးနှုံးလေ့ရှိပါတယ်။ EN ISO 4126 Standard code နဲ့ API 520 Standard code အရ၊ conventional safety valves တွေမှာ ဖြစ်ပေါါတဲ့ built-up back-pressure ဟာ၊ set pressure ပမာဏရဲ့၊ 10% ထက်မပိုစေဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Balance safety valves
Balance safety valves တွေကို၊ piston type balance safety valve နဲ့ bellow type balance safety valve ဆိုပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Fig. piston type balanced safety valve
piston type disc ဟာ vent guid အတွင်းမှာအထက်အောက်ရွှေ့လျားပါ တယ်။ piston ရဲ့ top surface area AP အပေါါမျက်နှာပြင်ဟာ၊ nozzle seat area AN နဲ့ တူညီပါတယ်။ disc area အပေါါနဲ့ အောက် တူညီ တဲ့အတွက်၊ effective backpressure ဟာညီမျှနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
PV = fluid inlet pressure, AN = nozzle area, FS = spring force, PB = back pressure, AD = disc area, AP = piston area တို့မှာ၊ disc area သို့မဟုတ် piston top surface are AP နဲ့ nozzle seat area AN တို့ဟာတူညီနေတဲ့အတွက်၊
အောက်မှတွန်းမယ့် fluid ရဲ့ force တနည်းအားဖြင့် nozzle area AN ပေါါသက်ရောက်မယ့် fluid pressure PV ဟာ၊ အပေါါမှဖိထားမယ့် spring ရဲ့ force FS နဲ့တူညီနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် piston type balanced safety valve တွေမှာ၊ back pressure သက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိ တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
spindle guide အနီးမှ၊ disc ရဲ့ upper surface area AB ဟာ၊ nozzle seat area AN နဲ့ တူညီပါတယ်။ disc ရဲ့ upper surface area မှာ၊ သက်ရောက်မယ့် back-pressure acting ကို bellows arrangement မှတားဆီးပေးပါတယ်။
Fig. bellows type balanced safety valve
အကယ်၍ upper disc area ဟာ၊ bellow အပြင်ဖက်ကိုကျော်လွန်ရောက်နေပြီး၊ disc ရဲ့ အောက်ဖက် မျက်နှာပြင် area နဲ့ တူညီခဲ့ရင်၊ forces acting ဟာညီမျှနေမှာဖြစ်သလို၊ သေးငယ်တဲ့ back-pressure လည်းပေါါပေါက်နိုင်ပြီး၊ valve opening pressure အပေါါ၊ သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါတယ်။
bellow expand and contract ကားသွားအခါနဲ့ ကျုံ့သွားတဲ့ အခါတွေမှာ၊ bellow အတွင်းမှလေကို၊ bellow vent မှတဆင့်အပြင်ကိုထွက်သွားစေပါတယ်။ bellows balanced safety valves တွေမှာ bellows failure လို့ခေါါတဲ့ bellow ပေါက်ခြင်းဟာ၊ set pressure အပါအဝင်၊ valve ရဲ့ capacity ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ bellow ပေါက်တဲ့အခါ၊ vent မှတဆင့် uncharacteristic fluid flow တခုဖြစ်ပေါါလာ နိုင်ပါတယ်။ oil and petrochemical industries တွေမှာ၊ critical applications အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ bellows balanced safety valves တွေကို၊ uncharacteristic fluid flow detecting mechanism ထည့်သွင်းတတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် corrosive fluid application တွေမှာ၊ back-pressure ကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ spindle guide နဲ့ spring တွေကို၊ isolate လုပ်ကာတတ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ balanced pressure relief valves တွေဟာဈေးနှုံးအရကြီးမြင့်ပြီး၊ very precise အလွန်တိကျဖို့လိုတဲ့၊ set pressure နဲ့ blow-down pressure လိုအပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေနဲ့ high pressure manifolds တွေအတွက် သာသုံးပါတယ်။
flow media ကိုပြန်သုံးပြီး၊ activated လုပ်တဲ့ pilot operated safety valves တွေကိုလည်း၊ diaphragm နဲ့ piston type ဆိုပြီးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ diaphragm type pilot operated safety valves တွေကို၊ low pressure in-compressible liquid applications တွေအတွက်၊ အသုံးပြုပါပြီး၊ proportional type action နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ steam application တွေမှာအသုံးပြုမှုမရှိသလောက်နည်းပါတယ်။
Fig. Piston type pilot operated safety valve
piston type pilot operated safety valve မှာ၊ obturator လို့ခေါါတဲ့ piston shaped closing device တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ main valve နဲ့ external pilot valve ဆိုပြီး၊ အစိတ်အပိုင်း (၂) ခုပါဝင်ပါတယ်။ ဝင်လာ တဲ့ fluid နဲ့ ထိတွေ့မယ့်၊ piston ရဲ့ bottom area ဟာ၊ piston ရဲ့ top area ထက်သေးငယ်ပါတယ်။ piston ရဲ့ top area ပိုကြီးတဲ့အတွက်၊ ပုံမှန်အခြေအနေမှာ piston အပေါါမှသက်ရောက်မယ့် closing force ဟာ၊ piston ရဲ့ bottom area မှသက်ရောက်မယ့် inlet force ထက်ပိုများမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်း အားဖြင့် piston ကို seat ပေါါမှာလုံနေအောင် အပေါါကဖိထားတဲ့ downward force နဲ့၊ ပိတ်ထားပေး တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
valve ထဲကို၊ ဝင်လာတဲ့ inlet pressure တိုးလာတဲ့အခါ၊ pilot line မှတဆင့် piston ပေါါသက်ရောက်နေ တဲ့ net closing force ဟာလည်းတိုးလာပါတယ်။ net closing force ကြောင့် piston ဟာ seat ပေါါမှာ tight shut-off အနေနဲ့ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ set pressure value ကို၊ inlet pressure ရောက်သွားတဲ့ အခါ၊ pilot valve ဟာ pop action နဲ့ပွင့်သွားပြီး၊ piston ရဲ့ အပေါါဖက်မှ pressure ကို release လုပ်လိုက် မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ piston အပေါါမှဖိထားတဲ့ net closing force လည်း၊ အနည်း ငယ်လျှော့ကျသွားပြီး၊ piston ကိုတွန်းတင်နေတဲ့၊ upward pressure ကြောင့် တပြိုင်နက်တည်းမှာ၊ main valve ဟာ pop action နဲ့ရုတ်တရက်ပွင့်သွားပြီး၊ process fluid ကို၊ discharge line သို့ release လုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။
Fig. pilot operated safety valve
pilot pressure ပြန်ကျသွားတဲ့အခါ၊ pilot valve ပြန်ပိတ်သွားပြီး net closing force နဲ့ main valve ရဲ့ piston ကို seat အပေါါမှာပြန်ထိုင်စေပါတယ်။ pilot operated safety valves တွေဟာ blow-down performance ကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ set pressure နဲ့ over pressure တို့ကြားမှာ၊ norrow blow-down marging ကိုလိုအပ်တဲ့ application တွေအတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် pilot pressure pipe line အရွယ်အစားသေးငယ်လွန်းတဲ့အတွက်၊ forgin matter တွေ ဝင်ရောက်တဲ့ အခါမျိုးတွေနဲ့၊ condensate တွေကြောင့်လည်း block ပိတ်ဆို့တတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ pilot line ပိတ်တဲ့အခါ၊ valve အဖွင့်အပိတ် function တွေ၊ failure ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။
Fig. Full lift safety valve
Full lift, high lift နဲ့ low lift safety valve
full life, high lift နဲ့ low lift ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးကတော့၊ valve disc ဟာ closed position မှ၊ ကြွတက် သွားခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီး၊ valve ရဲ့ discharge capacity အပေါါမှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ full life safety valve တွေမှာ၊ disc ဟာ bore diameter ရဲ့ 1/4th ခန့်ကြွတက်သွားတဲ့အတွက်၊ curtain area မရှိတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Fig. High lift safety valve
high lift safety valve တွေမှာတော့ bore diameter ရဲ့ 1/12th ခန့်သာ ကြွတက်တဲ့အတွက်၊ curtain area ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ high lift valve တွေရဲ့ discharge capacity ဟာ၊ full lift valve လောက်မမြင့်မား သလို၊ compressible fluid application တွေမှာ၊ propotional action နဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Fig. Low lift safety valve
low lift safety valve ကတော့၊ bore diameter ရဲ့ 1/24th ခန့်သာကြွတက်ပြီး၊ discharge capacity ပိုမို နည်းပါးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Reference and image credit to : Spirax Sarco USA - Steam engineering tutorials, Welding Metallurgy http://www.gowelding.com, http://en.wikipedia.org, http://www.SpiraxSarco.com
Posted by ဒူဒူကြီး at 02:55 1 comment:
Ballast Water Management Convention and The Guidel...
FSS Code - International Code for Fire Safety Syst...